အရေပြားအရောင်နက်ခြင်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး - Hello Sayarwon
အရေပြားအရောင်ပိုမဲနေခြင်းက သင်အခြားသူများနှင့်တွေ့ချိန်တွင်သင့်အားအရှက်ရစေသည်။ ထိုသို့မဲနေခြင်းကသင့်အားမထိခိုက်စေသည်ကိုသိသော်လည်း ထိုအခြေအနေအတွက် ကုသမှုကိုရှာပြီး မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြန်လိုချင်ြက်သည်။ ထိုအခါ အရေပြားအရောင်ပိုမဲသည့်ပုံစံများကိုသိဖို့လိုပြီး သင်တွင်ဖြစ်နေသောပြသာနာကမည်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိသင့်သည်။
အရေပြားအရောင်ပိုမဲနေခြင်းသည် အရေပြားတွင်ဖြစ်သောပြသာနာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သေးသော သို့မဟုတ် ကြီးသောအကွက်မဲများဖြစ်နေခြင်းအဓိကအားဖြင့်မျက်နှာအရေပြားတွင်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အရေပြားပေါ်ရှိဆိုးဆေးမယ်လနင်များခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယူဆချက်အရထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် သင်တွင်ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးပြသာနာရှိခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုလိုသော်လည်းသင့်အားစိတ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသည်။ သို့သော် အချို့သောကိစ္စများတွင် အခြားရောဂါအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ထိုသို့ပေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
မယ်လက်မာသည် ကြီးသောအနက်ကွက်များ မျက်နှာပေါ်တွင် အဓိကအားဖြင့်ပါးပေါ် နှာခေါင်းပေါ် နှဖူးပေါ် နှုတ်ခမ်းအပေါ် နှင့် အခြားခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ ဥပမာ လက်ဖျံပေါ်တွင်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမယ်လက်မာများသည် အရေပြားအပေါ် ၊အတွင်းလွာ သို့မဟုတ် အရောဖြစ်နိုင်သည်။
အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ အချက်အလက်အားဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမများတွင် ၉၀ရာခိုင်နှုန်းထိဖြစ်တတ်သည်။ ထိုကြောင့်ထိုမက်လက်မာကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးဟုပင်ညွန်းဆိုတတ်ကြသည်။
မယ်လက်မာဖြစ်စေသောအကြောင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း သန္ဓေတားဆေးသောက်နေချိန်အတွင်း ဟော်မှန်းများပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အပြီး သန္ဓေတားဆေးဆက်မသောက်ချိန်တို့တွင်သူ့အလိုလိုပြန်ကောင်းသွားတတ်သည်။
အရောင်အစက်များ- နေကြောင့်ဖြစ်သော အသက်ကြီး၍ဖြစ်သော အသဲကြောင့်ဖြစ်သောအမဲစက်များ တင်းတိပ်များပါဝင်သည်- သည်နေရောင်ကိုအချိန်အကြာကြီးထိတွေ့မှုများခြင်းကြောင်ဖြစ်သည်။ဥပမာ လက်နှင့်မျက်နှာ။ ထိုအရာများကို အရေပြားပေါ်တွင် ပိုမဲနေသော အစက်များတွင်ပါဝင်သည်။ ထိုအရောင်အစက်များသည် အဖြစ်များပြီး အသက်အရွယ်မျိုးစုံတွင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်းမိန်းကလေးများတွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။ အရေပြားအပေါ်ယံလွာတွင်ရှိသော အရောင်ဆဲလ်များများလာခြင်းကြောင့် အရောင်အစက်များဖြစ်လာသည်ဟုယူဆကြသည်။
အရောင်အစက်များသည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်ပိုပျံ့သွားနိုင်သည်။ အသက်အလယ်အလတ်နှင့် အသက်ကြီးသူများတွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအဆက်များသည် ဝ.၂ မှ ၂ စင်တီမီတာအထိရှိတတ်ပြီး မဲကာ ပုံသဏာန်မျိုးစုံဖြစ်နိုင်သည်။
တင်းတိပ်သည် သေးပြီး ညိုသောအစက်များဖြစ်သည်။ အနီ အဝါ သံရောင် ညိုဖျော့ယောင် အညိုယောင် သို့မဟုတ် အနက်အဖြစ်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ တင်းတိမ်များသည် ကျန်းမာရေးအတွက်အန္ဓါရာယ်လုံးဝမရှိပါ။ တင်းတိမ်များသည်မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပြီး မိဘတွင်ရှိပါက ရှိတတ်သည်။
သင့်အရေပြားထိခိုက်ပြီး ထိုသို့အကွက်များဖြစ်ခြင်းကို ယောင်ယမ်းပြီးနောက်ဖြစ်သောအမဲကွက်များဟုခေါ်သည်။ သင့်အရေပြားထိခိုက်ပြီး အနာကျက်ချိန်တွင် သင့်အရေပြားထိုနေရာတွင်အရောင်ပြောင်းသောအရာအဖြစ်ကျန်နေတတ်သည်။ ဝက်ခြံများသော မကြာခင်မီက အရေပြားအလှအပဆိုင်ရာကုထုံးများ ဥပမာ လေဆာကုထုံး ဓါတုအရေပြားလွာကုထုံးလုပ်ထားသူများတွင်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုသို့အရေပြားပိုမဲခြင်းကိုကာကွယ်၍မရနိုင်သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေနည်းအောင်လုပ်နိုင်သောနည်းများရှိပါသည်။ သင့်ကိုအကြံပေးလိုသည်မှ နေလောင်ကာကွယ်သောဆေးများသုံးပါ။ ဆရာဝန်နှင့်မတိုင်ပင်ပဲဆေးသောက်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။ လိုအပ်ပါကဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Hyperpigmentation.http://www.healthline.com/symptom/increased-skin-pigmentation.Accessed August 7, 2016.
Hyperpigmentation. http://www.aocd.org/?page=Hyperpigmentation. Accessed August 7, 2016.